theZOMI: [aurorageneration] ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ ရပ်တည်ချက်တစ်ခုတည်း ၊ တစ်သဘောတည်းပါပဲ။
[aurorageneration] ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ ရပ်တည်ချက်တစ်ခုတည်း ၊ တစ်သဘောတည်းပါပဲ။
UNITED , WE STAND …! ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ ရပ်တည်ချက်တစ်ခုတည်း ၊ တစ်သဘောတည်းပါပဲ။
The Followings are the World-Wide Anti-Islamic Websites ( Which show the True Nature of Islam) from UK,US, Australia, France, India, Denmark, Israel, Canada etc…
ကျနော့် ဆိုက်ဒ်တစ်ခုတည်း ဖတ်ရင် လိုအပ်တဲ့ information တွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မရနိုင်ပါဘူး။
Link ပေးထားတဲ့ Video ၄ ကား ကို သေသေချာချာ ကြည့်စေလိုပါတယ်။
အထူးသဖြင့် What the west needs to know ဆိုတဲ့ documentary movie လေးကို သေသေချာချာ ကြည့်စေချင်ပါတယ်
Islamic Strategy, Muslim Scenario တွေ ကို ရမ်ကျမ်းနဲ့ ယှဉ်ပြီး ရှင်းပြထားလို့ ပါ။
အဲဒီ၎ ကားကို ကြည့်ပြီး နိုင်ငံပေါင်းစုံ ကလူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံက လူတွေ တင်ထားတဲ့ အစ္စလာမ် အန္တရာယ် သတိပေးWebsite Link တွေ ကို ဖတ်ကြည့်ပြီး ရင်တော့ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ အစ္စလာမ် အန္တရာယ်ကို
ကျနော် အခုပြောနေတာထက်ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ အသေးစိတ် နားလည်သွားမှာ ပါ။
ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ကို နားလည်ပြီဆိုရင် သူငယ်ချင်းအဲဒီ ပုစ္ဆာကိုဖြေရှင်းဖို့ လွယ်သွားပါပြီ။
Watch the Movie of Islamic Beheading according to Qur'anic Islamic Law.
" I will instill terror into the hearts of the Unbelievers( Buddhist, Hindus, Jews, Christians,etc); smite ( cut off ) ye above their necks and smite all their finger-tips off them." Qur'an 8:9-13.
Watch the Following four types of Videos and you will fully understand the Purpose of Islam & Islamic Jihad.
1. to watch : What the West Needs to Know , Just Click or Copy Paste the Following Link.
2. Obsession the Movie
3. The Movie Fitna
4. The Third Jihad ( ဂျီဟတ်=တကမ္ဘာလုံး အစ္စလာမ်ဖြစ်ရေး နည်းလမ်းပေါင်းစုံ )
အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားတွေထက်ပို ပြီး ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အကြမ်းမဖက်ပဲ ကြွက်တွေလိုမျိုးပွားပြီး နိုင်ငံတွေကို ၀ါးမျိုမဲ့
USကို အစ္စလာမ်နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကြံစည်လုပ်ဆောင်နေကြသော US နိုင်ငံအတွင်းမှ မွတ်ဆလင်များ အကြံ ကို မွတ်ဆလင်ဟောင်းတစ်ဦးက ဖွင့်ချထားပုံ။
အဲဒီ Websites တွေကို ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီး ဖတ်ကြည့် လေ့လာကြည့်ပါ။
Islam ဟာ ရာဇ၀င်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ မိုက်ရိုင်းခဲ့တဲ့၊ လက်ရှိလည်း သူများဘာသာတွေအပေါ်စော်ကားတာတွေ၊ မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့လူတွေကိုခေါင်းဖြတ်သတ်တာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ ထင်ထားတာထက် ၊
ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ သိထားတာထက် အဆပေါင်းများစွာ ကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်။
ဒီလောက် ဆိုရင် နိုင်ငံအသီးသီး၊ လူမျိုးအသီးသီး၊ ဘာသာအသီးသီး လူတွေအားလုံး နိုးကြားလာပြီး က ဒီ ALLAH ဆိုတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးကိုကိုးကွယ်တဲ့ မွတ်ဆလင် တွေကို တော်တော် သတိထားကာ၊ မွတ်ဆလင်တွေ ရဲ့ ကြောက်စရာ ၊ ရွံစရာ ကောင်းပုံကို Public လူထုကို သတိပေး နေကြပြီဆိုတာ နားလည်ပြီထင်တယ်။
နိုင်ငံတစ်ခုတည်းက၊ လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းက ၊ ဘာသာတစ်ခုတည်းက အဲဒီ မွတ်ဆလင် Islam ကောင်တွေကို မုန်းနေတာမဟုတ်ပဲ….
ကဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံပေါင်းစုံ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ က လူတွေအားလုံး က မွတ်ဆလင် Islam ကောင်တွေ ရဲ့ အကြောင်း၊ စောက်ကျင့် စောက်ကြံ တွေကို ကိုယ်တွေ့ ခံစားသိရှိလာကာ၊နိုင်ငံတိုင်း က ရွံရှာမုန်းတီး နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
Islam သည် Eliminate လုပ်ပစ်ရမဲ့ အကြမ်းဖက် Psycho-Death-Cult ဆိုတာ နားလည်လာကြပါပြီ။
ဒါဟာ မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့ လူမျိုး အသီးသီးဘာာသာအသီးသီးက မည်သူမဆို သက်ဆိုင်ပါတယ်။
မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့ ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကို သန့်စင်(သတ်ပစ် ၀ါးမျို) ပြီး တစ်ကဘာလုံးကို အစ်ဆလာမ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ကိုရမ်ညွန်ကြားချက်အတိုင်း မွတ်ဆလင်တွေဟာ အတိအကျလုပ်ဆောင် မှာ မို့ လို့ ပါပဲ။
မွတ်ဆလင်တွေဟာ နှစ်ပေါင်းထောင်ချီတည်တံ့လာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့ ဘာသာတရားအသီးသီး။ ယဉ်ကျေးမှုအသီးသီး ကို ဖျက်ဆီးချေမှုန်းပြီး တစ်ကဘာ လုံး Islam ဖြစ်ရေးကို ကဘာဆုံးတိုင်အောင် လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံ အသီးသီး၊ ဒေသအသီးသီးထံကို အဲဒီ Islamization ဟာ အနှေးနဲ့အမြန် ရောက် လာ ကာ ၀ါးမျို ဖျက်ဆီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
မွတ်ဆလင်တွေ ဘက်ကတော့ ရှင်းပါတယ်။
မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ တစ်ကဘာလုံးကို ဘာသာရေးစစ် ကြေငြာ ပြီးသားပါ။
မွတ်ဆလင်တွေဟာ ကျွန်တော် တို့ ကို ရွေးချွယ်ခွင့် ၂ ခုပဲပေးထားပါတယ်။
၂။ လည်လှီးအသတ်ခံမလား? ၂ခုပဲရှိပါတယ်။
ဒါကြေင့် ကျွန်တော်တို့ မှာ လုပ်စရာ နှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။
၁။ မွတ်ဆလင် တွေကတစ်ကဘာလုံး က ဘာသာအသီးသီး၊ ယဉ်ကျေးမှုအသီးသီး ကို ဖျက်ဆီးတာကို ထိုင်ကြည့်နေမလား ?
၂။ တစ်ကဘာလုံး က မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့ လူအားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ Islam ကို Eliminate လုပ်မလား။ ?
မင်းရော Islam ထဲ ၀င်မှာ လား ?
Islam ကို Eliminate လုပ်မလား…?
We have only two options: either all of us accept Islam or we eliminate Islam.
If we do not destroy Islam, Islam would definitely destroy us.